Home News Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaadan doona dhigiisa Dalka Talyaaniga
Madaxweyne Farmaajo oo kulan la qaadan doona dhigiisa Dalka Talyaaniga
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo magaaladda Rome kula kulmay Ra’iisal Wasaaraha Talyaaniga Mudane Giuseppe Conte ayaa sheegay in dib u xoojinta xiriirka labada dal uu yahay qorshe mudnaan gaar ah u leh Dowladda Soomaaliya.
“Soomaaliya iyo Talyaaniga waxay wadaagaan xiriir taariikhi ah oo ku qotoma iskaashi dhaqaale, mid dhaqan iyo saxiibtinimo soo martay heerar kala duwan, waana tan udub dhexdaadka u ah in la xoojiyo xiriirkeena soo jireenka ah si aynu horumar iyo barwaaqo u gaarsiinno labadeenna shacab.”
Dhanka kale Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu waddaa in uu maanta kulan la yeesho Madaxweynaha Talyaaniga, waxaana lagu waddaa in uu dhankiisa uu kala hadlo taageeradda Talyaaniga ee Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale lagu waddaa in uu booqdo Goobo taariikhi ah oo ku yaalla Magaalada Roma.
Previous articleDowladda Kenya oo ku dhawaaqday in ay dib u fureyso xadka ay wadaagaan soomaaliya
Next articleEx Madaxweyne Xasan Sheekh oo si kulul kaga soo horjeestay midoowga Dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya
Qatar renews support for Somalia to build state of institutions, rule...
Warsiirkii Ku Fashilmay Shadaqada Wasaarada Gaashaandhiga C/rashiid C/llaahi Maxamed Oo Maanta...